Nin wasiir iska dhigay oo malaayin lacag ah dhacay - BBC News Somali
Nin wasiir iska dhigay oo malaayin lacag ah dhacay
Image caption Sawirka bidixda wasiirka saxd ah ah Jean-Yves Le Drian, bidixdana wasiirka beenta ah Le Drian
Lacagtana wuxuu shirkadaha iyo shaqsiyaadka uu kaga qaatay xiriir uu la soo sameeyey isaga oo u sheegay inuu yahay Mr Le Drian, oo uu lacagtaasi u doonaya inuu madax furasho u siiyo wariye ay haystan koox islaamiyiin ah.
Balse lacagti lama siinin kooxda la sheegay iney wariye qafaalasho ku haystan, lacagtiina waxay ku dhacday akoonka uu shaqsi ahaan u lahaa Jean-Yves Le Drian.
Muxuu ninkan wasiirka isugu ekeysiiyey?
"Sheekadan iyo sida ay u dhacday ayaa ah mid ka duwan sheekooyinka been abuurka oo horay u dhici jiray", ayuu yiri Delphine Meillet oo hadda ah wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska.
"Wasiirka Faransiiska ee hadda shaqeynaya waxa uu yiri tillaabbooyin lagu ogaanayo ciddi been abuurashadasi ka dambeysay ayaan qaadnay. Waxaanna isugu yeernay madaxdi ay quseeysay si aan u ogaanno lacagtaasi faraha badan uu ninka lunsaday iyo cidda ay lacgahaasi ka maqan yihiin.
Image caption Yves Le Drian oo dhanka midig jira wuxuu ka qayb qaatay ruwaayadda afduubka
Wixi ka horreyey 2012-ka Mr Le Drian wuxuu ahaa siyaasi ka tirsan xisbiga hantiwadaagga Faransiiska.
Arrinta yaa fududeeyey?
Arrintan waxaa hadda gacanta ku haya hay'adaha sharciga ee dalka Faransiiska, waxaana shakiga ugu badan laga qabaa nin fannaan caan ah oo ka soo jeedo Israel oo lagu magcaabo Gilbert Chikli.
Ma tahay mid sahlan in la isu ekeysiiyo qof caan ah?
Image caption Gilbert Chikli oo 2017-ki la soo taagay maxkamad ku taallo Ukrine
Ms Meillet, waxay sheegtay inuu ninkaasi si isdaba joog ah uu u wici jiray madaxda waddamada qaaradda Afrika, kuwa Kaniisadaha iyo Hay'adaha Samafalka oo ay ka mid thay hay'adda Sidaction.
Been abuurka siduu u meel maray?
Image caption Ninka sheegtay wasiirka gaashaandhigga Faransiiska oo xiran Maaskaarda wajiga wasiirka saxda
Image caption Madaxweynaha Faransiiska iyo Madaxweynah Senegl oo kulmay 2018-ka
War been abuur ah oo sababay isku dhac dhex maray Tahriibayaal iyo boolis